Ukuhlinzeka ngezinhlobo zezivivinyo zokuhlola umlilo,Imodeli evamile nezinga lokuthekelisa kungakhethwa,ukwenza ngendlela oyifisayo kwamukelekile.
Ukusetshenziswa okuyinhloko kwe-Fire assay yokuhlaziya i-Precious Metal, Ilabhorethri Yezimayini, Ukuhlolwa Kwaselabhorethri, Ukuhlolisisa Amaminerali, Ukuhlolisisa Umlilo, Ukuhlolisisa Igolide
Ukukhethwa kwethu kokuhlolwa komlilo kwekhwalithi ephezulu ye-alumina bauxite, i-mullite, i-kaolin njengempahla eluhlaza enefomula yesayensi, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe okwakhiwa ngamathani amakhulu we-hydraulicmodern, I-Sintered ngokucubungula kwegesi yemvelo ukucindezela izinsimbi, okuqukethwe okuphansi kakhulu kwegolide nesiliva kungenza imiphumela yokuhlolwa inembe kakhulu.
Singenza i-OEM ne-OBM Ngokusho komdwebo wakho kanye nezidingo zakho.
I-Fire Assay Crucibles
I-crucible yesimanje yokuhlola umlilo ayikude kangako naleyo yakudala ngaphandle kwesayensi eyengeziwe ngemuva kokwakheka kwayo. Iziphambano zesimanje zenzelwe ukusetshenziswa elabhorethri esikhundleni sokucwengisiswa ngakho-ke zidingekile ukuba ziqine emibhalweni yazo. Ukwengeza kufanele zibe namandla ngokwanele ukuze zimelane nezinguquko ezinkulu kuzinga lokushisa ngokusebenzisa ukusetshenziswa okuningi.
· I-Flux nesampula yengezwa ku-crucible
· Izengezo ezingenhla zixutshwe ndawonye ngaphakathi
· Ukushisa kusetshenziswa ku-crucible kanye nengxube ngokubeka ibhodwe esithandweni somlilo> 1000oC
· Ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe ngaphambili, i-crucible iyasuswa futhi okuqukethwe okuncibilikisiwe kuthelwa esikhunjini sensimbi.
· I-crucible ipholile futhi ilungele ukusetshenziswa okulandelayo, kodwa ingase ilahlwe uma isampula yangaphambili iqukethe inani eliphezulu legolide.
Ngokhuni Ubukhulu bekesi (mm)
I-pigment sintered ceramic crucible yethu inika ukuphila isikhathi eside, ukuncibilika ngokushesha, isivinini esingapheli sokuncibilika kanye nokumelana okukhethekile noshintsho olunamandla lokushisa.Senza futhi sinikeze ukusebenza okuphezulu kwe-pigment sintered ceramic crucible. ingxube yesayensi yamaqoqo ezinto ezibonakalayo, ukucindezela okufanele ngodayi abanembile, namazinga okushisa afanele aqeda lapho ashiswa khona, kunikeza izinga eliphakeme kakhulu lamandla omshini ukuze amelane nokushaqeka okukhulu okushisayo. Izinto ezisezingeni eliphezulu ezisetshenziswa ekwenziweni kwazo, kuhlanganiswe nokukhiqizwa okulawulwa ngokucophelela, kuqinisekisa ukushisa okwengeziwe nge-crucible ngayinye, ngaleyo ndlela kunikeze inani elithe xaxa.Uhlelo lokusebenza oluyinhloko i-sintering encapsulted pigments ebomvu yezitsha zobumba, usayizi owenziwe ngokwezifiso uyamukeleka.Ikhwalithi ephezulu kanye nenkonzo esheshayo umgomo wethu.